Samsung ၏ Galaxy Note ကို7ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
အဆိုပါ Samsung ၏ Galaxy Note ကို7ဖြစ်, သံသယမပါဘဲ, သွားကိုအကောင်းဆုံး Phablet ကို. ဒါဟာအင်အားကြီးင်, gimmicks ၏လမ်းအတွက်အသုံးဝင် features နဲ့နည်းနည်းအပြည့်အဝ, နဲ့ productivity tools တွေကိုတခြားသူတွေကိုရိုးရှင်းစွာမကျင့်ကိုထောက်ပံ့ပေး.
သွားကိုအကောင်းဆုံး Phablet ကိုယခုရေစိုခံသည်, တစ်ဦးတောက်ပကွေးဖန်သားပြင်နှင့်အတူ, ပိုကောင်းတံနှင့်နှိမ်နင်းကင်မရာများ, တစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့အတွက်ပတ်ရစ်, ပရီမီယံကိုယ်ခန္ဓာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ၏ Galaxy Note ကို7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အ phablet ပြန်ရှင်ဘုရင်၏” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 25 သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
က Galaxy Note ကို7တံ-တပ်ဆင်ထား phablet ၏ Samsung ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဘို့ကိုဗြိတိန်မှပြန်လာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့မည်သူမဆိုတကယ်တော့ဘူးတဲ့တံချင်ပါဘူး?
အဖြေကို "မ" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်၏ "S Pen ပါ" မထိဘယ်တော့မှရင်တောင်, ထိုမှတ်ချက်7အခြားအရာတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း. ဒါဟာအသုံးပြုသူများ built-in အနီအောက်ရောင်ခြည်မျက်ဝန်းကင်နာများနှင့်အတူသူတို့၏မျက်စိကိုအသုံးပြုပြီးသော့ဖွင့်နိုင်သည်ကိုမည်သည့်အရွယ်အစား၏ပထမဦးဆုံးဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ရှေ့နှင့်နောက်ကျောနှစ်ဦးစလုံးအနားမှာကွေးနေကြတယ်, ကျဉ်းမြောင်းသောစက်ပစ္စည်းအတွက်အောင်, မျက်နှာပြင်ရဲ့ 5.7in ထောင့်ဖြတ်အတိုင်းအတာနေသော်လည်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7၏ခြင်းတို့လည်းပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည် က Galaxy S7 Edge. တစ်ဦးကကွေးမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်ဆင်း bends နှင့်တစ်ဦးဖန်ပြန်ရှေ့မှအလားတူဖက်ရှင်အတွက်ဝိုင်းသည်. သေးငယ်တဲ့သတ္တုတီးဝိုင်းပြင်ပပတ်ပတ်လည်ရှိပါသည်. side-by-side ကိုသာသိသာထင်ရှားကွာခြားချက်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်7အလွန်အနည်းငယ်ပိုကြီးဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာ 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူင်, 153.5မီလီမီတာအရပ်ရှည်ရှည်နှင့် 73.9mm ကျယ်ပြန့်. အဆိုပါ S7 Edge 0.2mm ပိုမိုပါးလွှာသည်, 2.6ကျဉ်းပိုမိုတိုတောင်းခြင်းနှင့် 1.3mm မီလီမီတာ. အဆိုပါမှတ်ချက်7လည်း 169g မှာလေးလံ 12g ဖြစ်ပါတယ်, တံဆိုက်ကပ်နှင့်အတူ. အဆိုပါကွဲပြားခြားနားမှုအသုံးပြုမှုအတွက်မှုမရှိခြင်းကိုများမှာ, သော Note ကိုမှန်ကန်စေသည်7သုံးစွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံးကြီးမားသောဖုန်းများတယောက်, နှင့်၎င်း၏အကြီးအကဲပြိုင်ဘက်ကို, Apple ရဲ့ iPhone ကို 6S Plus အားနဲ့ Nexus 6P, နီးပါးတိုင်းရှုထောင် bar ကိုအထူရှိအပြုသဘောအဆီကြည့်ရှု – အိုင်ဖုန်းနဲ့ Nexus နှစ်ဦးစလုံး 7.3mm အထူရှိပါတယ်.
အဆိုပါကွေးမျက်နှာပြင်အနားအလုပ်လုပ်တဲ့ထက်ပိုဗေဒရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် Note ကိုကိုင်ဆောင်စေသည်သည့်ကျဉ်းမြောင်းသော width ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးပါ7နီးပါးမည်သည့်အခြား Phablet ကိုထက်အများကြီးပိုလွယ်. ဒါဟာလက်၌ကြီးသောခံစားရ, အနားမှာရှိတဲ့သနျ့စတဲ့အဆင့်ကိုနှင့်အတူ, မည်သည့်ယခင်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပစ္စည်းများနှင့်အသွင်သဏ္ဌာန်.
အဆိုပါ 5.7in ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD ကို AMOLED မျက်နှာပြင်တောက်ပ၏တစျခုဖွစျသညျ, ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲငါစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်တွေ့မြင်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး, inky လူမည်းများနှင့်ရဲရင့်သောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူ. ဒါဟာအပြင်မှာရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်င်, တခါတရံအလွယ်တကူအိုအယ်လ်အီးဒီ-based ဖန်သားပြင်ထုတ်ဆေးကြောဘို့ထူးခြားပြောင်မြောက်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပြီးသားတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ထက်ပင် သာ. ကောင်း၏ မြတ်သော S7 Edge.
အဆိုပါမှတ်ချက်7အဘို့အ 1.5 ဆိုလိုတာကလည်း IP68 စံချိန်စံညွှန်းမှရေစိုခံသည် 30 လတ်ဆတ်တဲ့ရေထဲမှာမိနစ်. အဆိုပါဆိပ်ကမ်းများဖွင့်လှစ်ကြသည်, အရာမျှမ fiddly တံခါးများကိုဆိုလိုသည်, တံ slot ပါနှင့်၎င်း၏ S Pen ပါအပါအဝင်, ယခုလည်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရေအောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်.
Screen ကို: 5.7quad HD ကို AMOLED အတွက် (518ppi)
processor: Octa-core ကို Samsung က Exynos 8890 သို့မဟုတ် Quad-core Qualcomm Snapdragon 820
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0.1 TouchWiz နှင့်အတူ
ကင်မရာကို: 12OIS နှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာကို, 5အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ကို USB-C ကို, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, ဘလူးတုသ် 4.2 နဲ့ GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 153.5 x က 73.9 x က 7.9 မီလီမီတာ
အပြာရောင်နှင့်ရွှေမှတ်ချက်7ဇာတိပကတိ၌အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7အတူတူ Processor ကိုရှိပါတယ်, ဂရပ်ဖစ်နှင့် RAM ကိုပမာဏ အ S7 Edge အဖြစ် နှင့်အလားတူလုပ်ဆောင်.
အ S7 Edge လိုပဲ, ထိုမှတ်ချက်7သငျသညျမှာပစ်စေခြင်းငှါ, တော်တော်တာဘာမှအားဖြင့်လျင်မြန်စွာ snappy နှင့် crunches ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစီအစဉ်များအကြားအထူးသဖြင့် sprightly တင်နှင့် switching ခံစားရ. split-screen multitasking ကိုလည်းနှေးကွေးပါဘူး, တစ်ဦး 5.7in screen ပေါ်မှာ၏ utility ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်.
ဘက်ထရီသက်တမ်းအနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမှတ်ချက်7တကယ်အစာရှောင်စွဲချက်, ရိုက် 70% တွင် 50 ်မှကို USB-C ကိုအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းမှတဆင့်မိနစ်, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီအထူးကုသမှုမပါဘဲတစ်နေ့ထက်အများကြီးပိုကြာရှည်မည်မဟုတ်.
အကြှနျုပျ၏မူလတန်း device ကိုကိုကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်း, Bluetooth ကိုနားကြပ်ကနေတစ်ဆင့်ဂီတငါးခုမှနာရီကိုနားထောငျ, browsing နဲ့တွန်းအားပေးအီးမေးလ်များရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူသုံးနာရီ app များကို အသုံးပြု. နှင့် 30 အလင်းဂိမ်းကစားခြင်း၏မိနစ်, ထိုမှတ်ချက်7တစ်နေ့နှစ်ဦးအပေါ် 8am သည်အထိတစ်နေ့တစ်ခုပေါ်တွင် 7am မှကြာ.
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပရိဘောဂတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသို့တည်ဆောက် 5W pad ပါအပေါ်ကောင်းစွာနေ့ချင်းညချင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့. ဘက်ထရီချွေတာသည် Modes, app များကိုစောင့်ကြည့်သောသူတို့၏နှင့်အာဏာကို အသုံးပြု. သူတို့ကိုတားဆီးဖို့သင်အိပ်ကိုမသုံးကြဘူးသူတို့အားတင်အပါအဝင်, တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လှိမ့်သကဲ့သို့ငါဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာဖို့ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတွေ့နေကြပါတယ်.
ဒါဟာအစဘက်ထရီသက်တမ်းပတ်ပတ်လည်အားဖြင့်တိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်မယ့် 10%-20% နှင့် အန်းဒရွိုက်ထဲကလှိမ့် 7.0 Nougat.
အဆိုပါ app များ, လူများနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်အစွန်းအကွေးမျက်နှာပြင်၏ဘက်မှာငယ်လေးတစ်ပါကိုထိပုတ်ထဲကနေထွက် slides. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7၏တူညီသောပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းပြေး Android မှာ 6.0 Marshmallow ကိုခေါ် TouchWiz အ S7 Edge အဖြစ်, ဒါပေမယ့်ဖြည့်စွက်တံကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့်အတူ.
အန်းဒရွိုက်မှ Samsung ရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံအများစုဟာကောင်းပါတယ်, အထူးသဖြင့် Android မှာအဖြစ် 6.0 Marshmallow ဖြစ်ပါသည် ယခုနေ့စွဲထဲက. ဒါဟာပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် setting များကိုရှိပါတယ်, အိပ်မှအသုံးမပြုတဲ့ app များကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ system အပါအဝင်ပိုပြီးပါဝါကိုချွေတာသည် Modes, ထိုတုန်ခါမှု၏တန်ခိုးအပါအဝင်အသိပေးချက်များကိုကျော်ကျယ်ပြန့်ထိန်းချုပ်, နှင့်ညအချိန်အသုံးပြုမှုအတွက် built-in အပြာအလင်း filter ကို.
ထိုအကြောင်းကြားစာအရိပ်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့အသံ output ကို settings ကိုသငျသညျအမြိုးမြိုးသော Bluetooth ကိရိယာများအကြား output ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြု, နားကြပ်နှင့်ပြည်တွင်းရေးစပီကာ, ဘာမှ disconnect ရန်မလိုဘဲ.
သေးငယ်တဲ့အစွန်း utilities ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရရှိနိုင်ပါ, လျင်မြန်စွာအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ် apps များနှင့်ချိတ်ဆက်များအတွက်အသုံးဝင်သော, ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြောင်းထက်ကျော်လွန်. သူတို့ကိုသင်အသုံးဝင်သောမတှေ့ဘူးဆိုရငျသူတို့ကဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်. Samsung ရဲ့ဂိမ်းကစား tools တွေကိုဂိမ်းရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်, ကစားနှောင့်ယှက်ခြင်းမှအကြောင်းကြားစာများသို့မဟုတ်ခလုတ်ရပ်တန့်နှင့်ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေဖို့စမတ်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ရန်နိုင်. သင်လည်းကြောင့်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်မပါဘဲဂိမ်း minimize နိုင်.
ဒါဟာအားလုံးမကောင်းမင့်, သို့သော်. အ homescreen မှာအ Upday လူမှုရေးသတင်းစုစည်း panel က (သောအစောပိုင်းက Samsung ဖုန်းများပေါ်တွင် Flipboard အစားထိုး) ငါနာကျင်ကျိန်းစပ်ကိုတွေ့ဒါကြောင့်ငါကပိတ်ထား. ငါသည်လည်း Samsung ရဲ့အသစ်တိမ်တိုက်ထပ်တူပြုခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ် bug ကိုခံစားခဲ့ရ, သော Samsung ရဲ့အခမဲ့ 15 ဂစ်ဂါဘိုက် cloud storage မှဖုန်းရဲ့ contents တွေကိုဖွင့်ခင်ရီထောက်ခံ, သောလျှင်မြန်စွာဘက်ထရီကုန်မှအန်းဒရွိုက်မီဒီယာ server ကိုဝန်ဆောင်မှုစေသော.
မီဒီယာ server ကို bug တွေကို Samsung စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူဘုံရှိပါတယ်, များသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့် SD ကဒ်များအပေါ်ပုပ်ပုံရိပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်, မဒီကိစ္စတွင်ပေမယ့်ငါကာ microSD card ကိုအချိန်ကို install လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးအဖြစ်. Samsung ကတိမ်တိုက်ထပ်တူပြုခြင်းကိုပိတ်ခြင်းငါရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းဘက်ထရီယိုစီးမှုမှတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းခဲ့သည်. ဒါဟာဖွယ်ရှိတဲ့ Pre-လွှတ်ပေးရန် device ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်; ဒါကြောင့်ငါကအတူရှိခဲ့ကာလ၌အများအပြားအသစ်ပြောင်းခြင်းတယ်.
Microsoft ရဲ့ Office ကို, Skype နှင့် OneDrive apps များကို pre-installed လာ, ကိုပိတ်ထားပေမယ့် uninstall လုပ်ပေးဖို့မရနိုင်သော.
မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်နေစဉ်အတိုမှတ်စုရေးသားခြင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်လွန်ကမှတ်ချက်အဖြစ်အလွန်အသုံးဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အန်းဒရွိုက်မှ Samsung ရဲ့ software ကိုအပြောင်းအလဲ၏ကြွင်း S Pen ပါတံကိုထောကျပံ့ဖို့ရှိပါတယ်, ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအသေးငယ်တဲ့ styluses တယောက်အရာဖြစ်ပါသည်. ဖိအား-ထိခိုက်မခံတဲ့ NIB ယခင်ဗားရှင်းထက်သိသိသာသာသေးငယ်သည်, သောကပိုတိကျမှန်ကန်ခံစားရစေသည်, မြေတပြင်လုံး system ကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးက Samsung app ကိုသုံးနေတယ်အဖြစ်အလွန်တုံ့ပြန်မှုနေစဉ်.
Evernote အတွက်တံအသုံးပြုခြင်း, ဥပမာအားဖြင့်, သုံးနေပြီတစ်နည်းနည်းသိသာခဲ့ပေမယ့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခံစားကိုလည်းအများကြီးပိုစက္ကူပေါ်မှာရေးဆွဲတူအောင်တိုးတက်ခဲ့.
Samsung ရဲ့အသစ်မှတ်စုများ app ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်တံရဲ့ features အများစုကိုအတူတူစုဆောင်း. လက်-ရေးဆွဲမှတ်စု, စာသားမ, လက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှု, အသံနှင့်ရုပ်ပုံများကို Samsung ကတိမ်တိုက်နှင့်အတူ collated နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစွာ Samsung ရဲ့အဟောင်းတွေ S ကိုမှတ်စုများတူ Evernote မဟုတ်.
သငျသညျဘာသာပြန်ချက်ဘို့စာသားအမြန်ရွေးချယ်စေတံကိုသုံးနိုင်သည်, မျက်နှာပြင်မှတ်စာများနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား tools တွေကိုတစ်ဦးအစိုင်အခဲစုဆောင်းခြင်းကိုသုံး. ဖုန်းအိပ်ပျော်သောအခါအဆိုပါ S Pen ပါမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်, သောက Samsung မှတ်စုများမှကယ်တင်ခြင်းနှင့် Post-ကမှတ်ချက်ကဲ့သို့မျက်နှာပြင်တွင်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်.
မျက်နှာပြင်စိုစွတ်သောအခါအားလုံးတံရဲ့ features တွေကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်, သောကရေအောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုလိုသည်, သင်အမှန်တကယ်လိုလျှင်. တဲ့အခါမှာမဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်သေသပ်စွာဖုန်းထဲသို့တံဆိပ်ကမ်းဆီ.
အဆိုပါတံသေးသေးကားချပ်ဆွဲဘို့အတော်လေးအသုံးဝင်သည်, ပုံကြမ်းသို့မဟုတ်လက်ရေးမှတ်စု, ထက်သော်လည်းမအများကြီးပို. သို့သော်ထိုသို့တဦးတည်းလူသတ်သမား feature အသစ်မ: လက်ငင်း gif ချမှတ်ခြင်း. သငျသညျအထိတစ်ဦး gif စေရန်မျက်နှာပြင်ရဲ့ဧရိယာမှတ်တမ်းတင်နိုင် 15 စက္ကန့်.
အဆိုပါလက်ဗွေစကင်နာတစ်ဦးနေအိမ်ခလုတ်ကိုအဖြစ်နှစ်ဆ, USB-C ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူ – တစ်ဦးက Samsung ဖုန်းကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံး – ချက်ချင်းအောက်က. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ရှေ့ပေါ်လက်ဗွေစကင်နာက Galaxy S7 Edge အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အစိုင်အခဲသည်, ထိုအချိန်ကာလ၏ချက်ချင်းငါ့လက်ချောင်းနဲ့လက်မအသိအမှတ်ပြုအများဆုံး. ဒါဟာအစ apps များလုံခြုံလိမ့်မည်, ဝယ်ယူမှုနှင့် passwords, ပဲမဆိုအခြား Android Marshmallow သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း device ကိုတူ.
ငါ့မကျြမှောကျသို့ကြည့်ရှုလော့. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7စကင်ဖတ်ဖို့မျက်ဝန်း feature ဖို့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်သင့်မျက်ဝန်းများ၏ထူးခြားသောပုံစံများကိုက်ညီဖို့အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာကိုအသုံးပြု. ဒါဟာဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးသငျ၏မကျြစိကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်, နှင့်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ဖုန်းကိုသော့ဖွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒုတိယအတွင်းတစ်ခုခုစစ်မှန်ကြောင်း.
သင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျက်စိအဆင့်ကပေါ်ထွန်းစေရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပင်လက်ျာအမြင့်မှာတစ်ဦးကိုချွတ်-စင်တာတစ်ချက်နှင့်ငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်. ငါမျက်မှန်ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးကိုမသုံးကြဘူး.
ဒါဟာလက်ဗွေစကင်နာများကဲ့သို့အဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ screen ပေါ်မှာပွတ်ဆွဲဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်ကိုသို့မဟုတ်လက်ဗွေစကင်နာဖုံးလွှမ်းကြသောအခါအလုပ်ဖြစ်တယ်, ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အလွန်အသုံးဝင်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်.
နောက်ကျောအပေါ် 12-megapixel ကင်မရာ optical image stabilization နဲ့လျင်မြန်စွာ autofocus ရှိပါတယ်, အဖြစ်အစာရှောင်ရာမှန်ဘီလူး, အနိမ့်အလင်းဓာတ်ပုံနဲ့၏ဆုံးအောင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7က Galaxy S7 Edge ကဲ့သို့တူညီသောရှေ့နှင့်နောက်ကျောကင်မရာကရှိပါတယ်, စမတ်ဖုန်းအပေါ်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအခြို့သော.
အဆိုပါနောက်ဘက် 12-megapixel ကင်မရာအစာရှောင်သည်, အနိမ့်အလင်းနှင့်အခက်ခဲဆင်းရဲသားဓာတ်ပုံကိုယူစေသည်၌ကြီးသော. ဒါဟာသိပ် RAW ဓာတ်ပုံများယူနိုင်ပါသည်. အဆိုပါ front-facing 5-megapixel ကင်မရာ selfie ကင်မရာကကောင်းလှ၏, ဒါပေမဲ့ဒဏ်ငွေအသေးစိတ်ကင်းမဲ့, အချို့သောပိုပြီးချော့မော့ရှာတွေ့စေခြင်းငှါပျော့ပြောင်းပြီး-ရှာဖွေနေဓာတ်ပုံများထုတ်လုပ်.
အဆိုပါအမြဲ-အပေါ် display ကိုတစ်နာရီနှင့်အသိပေးချက်များကိုပေးနိုငျ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Spotify သို့မဟုတ်အခြားဂီတ apps များမှကစားခြင်းရဲ့အဘယျသို့တစ်ဖတ်ထွက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ကျောဖန်ပွတ်တိုက်၏အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားပါတယ်, သောကပိုမိုလွယ်ကူကိုင်စောင့်ရှောက်ရန်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းတကလက်ဗွေသံလိုက်စေသည်
အနိုင်နိုင်မည်သူမဆိုကနျြးမာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျ employ လိမ့်မည်ဟုကျောအပေါ်တစ်ဦးနှလုံးစည်းချက်အာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့တက selfie ကင်မရာကိုခလုတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
အဆိုပါအမြဲ-အပေါ် display ကိုအချိန်ကိုပြသထားတယ်, နေ့စှဲ, ပွက်ခဒိနျသို့မဟုတ်ပုံရိပ်, သင်၏ဆက်တင်ပေါ် မူတည်., ညဉ့်အချိန်၌သင်တက်စောင့်ရှောက်မ set ကိုနာရီအကြားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်စီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်လုံးဝပိတ်ထား
အဆိုပါအမြဲ-အပေါ် display ကို (ငါသည်ငါ့ဘက်ထရီစမ်းသပ်မှုတွေလှည့်တက်ကြွသော) ပတ်ပတ်လည်ကိုလောင် 10-15% ဘက်ထရီသက်တမ်း၏အသီးအသီးသောနေ့ရက်
အဆိုပါမှတ်ချက်7ငါစမျးသပျပြီးပြီဆိုစမတ်ဖုန်းများ၏အပြင်းထန်ဆုံး signal ကိုခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီယိုစီးမှုခံစားခဲ့ရနှင့်လန်ဒန်ခရီးသည်ရထား၏သိပ်သည်းခြင်းကွန်ယက်ကိုအခြေအနေများအတွက်ပူတယ်
အဆိုပါ Samsung ၏ Galaxy Note ကို7£ 700 ကုန်ကျသုံးယောက်အရောင်ရရှိနိုင်: အနက်ရောင်, ရွှေကိုနှစ်ဖက်နှင့်အတူအပြာ, ငွေ.
နှိုင်းယှဉ်, ထို 5.5က Galaxy အတွက် S7 Edge £ 639 ကုန်ကျ, အ 5.7in Google Nexus 6P £ 449 ကုန်ကျ (64GB ကို£ 499 ဖြစ်ပါတယ်) ပြီးနောက် 5.5Apple က iPhone ကို 6S အတွက် Plus အား£ 619 ကုန်ကျ (64GB ကို£ 699 ဖြစ်ပါတယ်), သော Note ကိုမှန်ကန်စေသည်7ထိပ်တန်းအဆုံးပြိုင်ဘက်ကဲ့သို့တူညီသောစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်..
အဆိုပါ S Pen ပါသမျှသောသင်တို့၌အချိန်ကိုမသုံးစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုသည်, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ရက်ကယ့်နေရာလေးကိုလာ, အခါမအသုံးပြုမှုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာဆိပ်ကမ်းဆီထွက်လမ်းကို, ဖုန်းရဲ့ဗေဒသို့မဟုတ် function ကိုမှ detracting မဟုတ်.
အဆိုပါကင်မရာများ, လက်ဗွေစကင်နာ, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, ရေစိုခံတာနဲ့မျက်နှာပြင်လည်းထိပ်တန်းထစ်ရှိပါတယ်. ဒီတော့လျောက်ပတ်သည်, ထိုကိရိယာ၏ finish ကိုနှင့်ခံစား. အဆိုပါမျက်ဝန်းကင်နာများတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုအသုံးဝင်သည့်အခါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလိပ်ဖြစ်လာစေခြင်းငှါတစ်ဦးအသစ်အဆန်းဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ထိုသို့မှတ်ချက်7ရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းနည်းဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာပြင်ပတ်လည်ကွေးအနားနှင့် minuscule bezel ဖြစ်ပါသည်.
သူတို့ကတစ်ဦးအလွန်ကြီးမားဖုန်းကိုလုပ်လွန်းကိုင်လွန်းကြီးတွေမခံစားရ – ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်အိမ်ခြံမြေစှနျ့မပါဘဲမည်သည့်အခြား 5.7in Phablet ကိုထက်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမယ့်.
တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်ဘက်ကို, သောသြဂုတ်လပတ်ပတ်လည်စတင် Samsung ရဲ့ Note ကိုစီးရီး၏အသီးအသီးအဘို့တူညီခဲ့, ၎င်း၏ software ကို up to date ဖြစ်နေမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်. Android မှာ 7.0 Nougat အများကြီးတိုးတက်လာသည် အသိပေးချက်များနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းအပေါ်. အဆိုပါမှတ်ချက်7Nougat တစ်ခု update ကိုရလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့လာသောအခါမသိနိုင်ပါဘူး.
အကောင်းအဆိုး: ရေစိုခံ, ကွေး screen နဲ့ပြန်, လက်ဗွေစကင်နာ, မျက်ဝန်းကင်နာများ, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, microSD card slot, S Pen ပါ, တောက်ပ display ကို, အလွန်ကြီးစွာသောကင်မရာက
Cons: မသေးအန်းဒရွိုက်7Nougat, တစ်ဦးတည်းသာတနေ့ဘတ်ထရီ, စျေးကြီး
push-button ကိုကလစ်နှိပ်နှင့်အတူဖုန်း၏အောက်ခြေသို့အ S Pen ပါ slot နှစ်ခု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, phablet, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← Android မှာ 7.0 Nougat ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Apple က waterproof iPhone ကိုဖော်ပြ7→